Denim Jarmal ah Dharka Haweenka | Buddha Trends - Buddhatrends
Ciidanka Xoogga Ah Xilliga Haweenka
$ 66.40 $ 83.00 Waxaad kaydisaa 20% ($ 16.60)
Hal cabbir / Ciid Green
Tani waxay ujeeddadeeda u tahay haweenka u dhadhamiya wax kasta oo dhul iyo cagaar ah. Isticmaalkiisa lacag la'aanta ah macnaheedu waa inaad ku xiran kartid si habboon, iyadoo aan loo eegin cimilada ama munaasabadda. Waxyaabaha laga sameeyey dharka tayada liicsan ayaa ka soo baxay qalab tayo leh oo tayo leh, waa sida raaxo leh maadaama ay tahay mid hagaagsan. Maaddadu sidoo kale ma aha mid aad u culus in la xidho xagaaga ama cimilada xilliga dayrta.
Naqshadeynta qaabka guud ee caadiga ah, waxa uu leeyahay qoto dheer oo qoto dheer V-neckline. At the dhabarka, waxay leedahay qoorta caadiga ah wareegsan. Dharka Cagaaran ee Fudud (Loose Green Nights) waxay leeyihiin shaashado-qurxiyo iyo furayaasha in hore si aad u xirto oo aad u qaadato stress-free sida ay noqon karto. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad ku hagaajin karto sida hoos u dhiga dhibcaha. Waxay leedahay jeebka sahlan dhinaca dhinaca bidix ee bidha oo laga arki karo furitaanka. Waxay kaloo leedahay jeebka dhinac kasta ee miskaha. Qulqulku wuxuu yareeyaa mid aad u hooseeya, isagoo ku dhow inuu gaaro jilbaha. Sumarku way yar yihiin, waxayna ku filan yihiin in ay ka hooseeyaan anqawgaaga. Lugaha ayaa, si kastaba ha ahaatee, waxaa la geyn karaa kor ka soo baxa anqawgaaga ama dhexda dhexe.
Waa kuwan qiyaasaha tixraacaaga:
Xaji 116cm, Hip 132cm, Saynis 139cm, Bust 120cm
Patchwork Plus Size Denim Joogto
Patchwork Plus Size Denim Joogto $ 83.30 $ 98.00
Plus Cabbiraad Caadi ah Caddaan iyo Calaamadee Hubi Plaid Guud
Plus Cabbiraad Caadi ah Caddaan iyo Calaamadee Hubi Plaid Guud $ 51.00 $ 60.00
Plus Size 90s Miisaaniyada Dumarka
Plus Size 90s Miisaaniyada Dumarka $ 40.20 $ 67.00
Duufaanta Guud ee Doogga Guud
Duufaanta Guud ee Doogga Guud $ 62.05 $ 73.00
Corduroy 90s Jaraa'idyada
Corduroy 90s Jaraa'idyada $ 54.40 $ 64.00
Jaalaha ah Jirka Jaalaha ah
Jaalaha ah Jirka Jaalaha ah $ 75.65 $ 89.00
Charlie Brown iyo Snoopy 90's Denim Jarmal
Charlie Brown iyo Snoopy 90's Denim Jarmal $ 102.85 $ 121.00
Dharbaaxa Lugaha ee Fidiyaha ah
Dharbaaxa Lugaha ee Fidiyaha ah $ 102.85 $ 121.00
Floral Denim Loss
Floral Denim Loss $ 70.55 $ 83.00